Sallaadintii Ku Xidhnayd Xabsiga Mandheera Oo La Sheegay Inay Cuntadii Ka Soomeen Iyo Xaaladooda Caafimaad Oo Laga Dayriyey | Berberatoday.com
Sallaadintii Ku Xidhnayd Xabsiga Mandheera Oo La Sheegay Inay Cuntadii Ka Soomeen Iyo Xaaladooda Caafimaad Oo Laga Dayriyey
Mandheera(Berberatoday.com)-salaadiintii waqooyiga Hargeysa ee ku xidhnaa xabsiga mandheera kuna eedeysnaa inay ku luglahayeen weerarkii laba bilood ka hor lagu qaday goob-diiwaangelineed ka tirsan degmada lughaya oo la yidhahdo Hadeyt.
Warar xog-ogaal ah oo ay heleyso shabaladda Wararka Berberatoday.net ayaa sheegaya inay laba kamid ah madaxdhaqameedka ku xidhan xabsiga mandheera ay sameeyen cunto joojin. Ma jirro war si caadan ah daboolka uga qaaday arrimahan oo ku saabsan dhinacyadda ay khuseyso Hase-yeeshee warar u dhuundaloola waxay Shabakadda Berberatoday.net u sheegen in
Labadaas Madax dhaqameed ee magacyadooda lagu kala sheegay Suldaan Mawlid Sabeyso iyo Cheif Caaqil Ibraahin Sulub. Sidoo kale waxa wararka shabakadu heshay waxay intaa ku Dareen, in xaaladda caafimaad ee suldan mawlid aanay wanaagsanyn islamarkaana uu mudooyinkii u danyeey xaaladiisu kasoo raynahayn.
Geesta kale maxkmadda degmada Hargeysa ayaa bilowday dhegeysig dacwadda loo haysto madax-dhaqameedkani, waxana waxana la sheegaya in madaxweynaha somaliland Md. Siilaanyo uu damacsan yahay inuu cafis kusoo daayo sullaadiintan xidhan.